किन हुन्छ स्तन वृद्धि ? ~ विज्ञान संसार
Posted by Om Bhandari On 12:39 AM
पोर्टस माउथ विश्वविध्यालयका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार महिलाको बढ्दो स्तन वृद्धिको जिम्मेवार कीटनाशक र प्रदुषण हो । बेलायतमा आफ्नो स्तन आकारको वृद्धिलाई लिएर महिलाहरू चिन्तित भएपछि यो अध्ययन गरिएको थियो ।
तीन हजार महिलामा गरिएको अध्ययनमा उनीहरूको जीवनशैली र खानपानबारे अनुसन्धान गरेपछि विशेषज्ञहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन । पोषण विशेषज्ञ डा. मर्लिन ग्लेनविलाका अनुसार ओस्ट्रोजेन हार्मेनले महिलाको शरीरलाई आकार दिन्छ । यो हाम्रोनको स्राव किशोरावस्थादेखि नै सुरू हुन्छ । शरीरमा यो हाम्रोनको स्तर बढ्नाले स्तनका तन्तु प्रभावित हुन्छन र यसले स्तनको अकार वृद्धि हुन्छ ।
अनुसन्धान अनुसार हाल खाद्यपर्दाथमा मिसिएका कीटनाशक र प्रदुषणका कारण महिलाको शरीरमा यो हाम्रोनको स्तर बढीरहेको छ । यसैकारण महिलाको स्तन सामान्यको दाँजोमा ठूलो देखिन थालेको हो । अनुसन्धान कर्ताका अनुसार यसो हुनु चिन्ताको विषय हो । यसले थुप्रै रोग निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले साथीहरू आजैदेखी सुरक्षित हुने उपाय खोजौँ, थुप्रै जोखिमबाट बचौँ ।